မထင်မှတ်လောက်အောင် ဇီဇာကြောင်လွန်းတဲ့ နာမည်ကျော်ဘောလုံးသမားများ (၁)
ဇီဇာကြောင်လွန်းတဲ့ နာမည်ကျော်ဘောလုံးသမားများ (၁)
25 May 2019 . 6:30 PM
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဇီဇာကြောင်တဲ့လူတွေကို တွေ့ဖူးကြမှာပေ့ါ။ တချို့ဆိုရင် ဇီဇာကြောင်လွန်းလို့ အပေါင်းအသင်း သိပ်မရှိတဲ့သူတွေလည်း ရှိကြတယ်။ ဒါဟာ သာမန်လူတွေတင် မဟုတ်ပါဘူး။ တကယ့်ကို ကမ္ဘာကျော်ဘောလုံးသမား တချို့မှာလည်း ဇီဇာကြောင်တဲ့ အကျင့်စရိုက်တွေရှိကြတယ်။ အဲဒီသူတွေက ဘယ်သူတွေလဲဆိုတာ ပရိသတ်တွေအတွက် ဗဟုသုတရအောင် ဖော်ပြလိုက်ပါတယ် . . .
ဘရာဇီးလ်နဲ့ ဘာစီလိုနာ ဂန္ထ၀င်ကစားသမား ရော်နယ်လ်ဒင်ဟိုဟာ ကစားသမားဘ၀ အဆုံးသတ်ခါနီးမှာ မက္ကဆီကိုကလပ် Querétaro အသင်းမှာ တစ်ရာသီ ကစားခဲ့ဖူးတယ်။ သူ့ကို ခေါ်ဖို့ Querétaro အသင်း ရင်းခဲ့ရတာက မနည်းပါဘူး။ ရော်နယ်လ်ဒင်ဟိုက အသင်းနဲ့ စာချုပ်ချုပ်ဆိုဖို့ ဆွေနွေးတဲ့အထဲမှာ သူ့ကို ခေါ်မယ်ဆိုရင် ရေကူးကန်ပါတဲ့ အိမ်၊ သဲသောင်ပြင်ဘောလုံးကွင်းနဲ့ ဘောလုံးကွင်းအသေးစား တစ်ခု၊ အိမ်အကူ (၄)ယောက် စီစဉ်သတ်မှတ်ပေးရမယ်လို့ တောင်းဆိုခဲ့လို့ပါပဲ။
ဂျာဗင်ဟိုကလည်း ရော်နယ်လ်ဒင်ဟို လိုပါပဲ။ တရုတ်စူပါလိဂ်ကလပ် ဟိုင်ဘေဖော်ကျွန်းအသင်းနဲ့ အပြောင်းအရွှေ့ကိစ္စ ဆွေးနွေးနေတုန်းမှာ သူက သီးသန့်ကမ်းခြေတစ်ခု၊ သူ့မိသားစုနေဖို့အတွက် အကောင်းစား အိမ်ကြီးရခိုင်တစ်လုံး၊ ရဟတ်ယာဉ်တစ်စင်း ပေးဖို့ တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဒါတင်မကသေးပါဘူး၊ အိုင်ဗရီကို့စ်ကို ပြန်ချင်တဲ့အချိန်ပြန်လို့ရအောင် လေယာဉ်လက်မှတ် စီစဉ်ပေးရမယ်ဆိုတာကလည်း ပါပါသေးတယ်။
အာဂျင်တီးနား ဂန္ထ၀င် မာရာဒိုနာရဲ့ တောင်းဆိုမှုက အပေါ်က နှစ်ယောက်လောက် သိပ်မများပါဘူး။ ယူအေအီးကလပ် Al Wasl အသင်းနည်းပြအဖြစ် ဆောင်ရွက်ဖို့ ကမ်းလှမ်းတော့ မာရာဒိုနာက သူ့သမီးနဲ့ မြေးရှိရာ စပိန်နိုင်ငံကို အချိန်မရွေးသွားနိုင်ဖို့ သီးသန့်ရဟတ်ယာဉ် စီစဉ်ပေးရမယ်လို့ တောင်းဆိုခဲ့ပြီး Al Wasl အသင်းကလည်း သဘောတူညီခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီရဟတ်ယာဉ်ကို မာရာဒိုနာ သိပ်တောင် မစီးလိုက်ရပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ (၁)နှစ်လောက်အကြာမှာပဲ ရာထူးက ထုတ်ပယ်ခံလိုက်ရလို့ပါပဲ။
PSG အသင်းနဲ့ နေမာရဲ့ အပြောင်းအရွှေ့ကိစ္စမှာ လူသိပ်မသိတဲ့အချက်တွေ ရှိခဲ့တယ်။ နေမာဟာ သူပေးရမယ့် အခွန်ငွေကို ကာမိအောင်လို့ (၁)နှစ်လစာကို ယူရို(၂၅)သန်း တောင်းဆိုခဲ့တဲ့အပြင် ပါရီမှာ သူ့နာမည်နဲ့ ဟိုတယ်တချို့ တည်ဆောက်ပေးရမယ်လို့ တောင်းဆိုခဲ့တယ်။ PSG အသင်းပိုင်ရှင် Al-Khelaifi က သဘောမတူခဲ့လို့ အစောပိုင်းမှာ ဆွေးနွေးမှု ကြန့်ကြာခဲ့ပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှတော့ ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲမသိ၊ နေမာလည်း PSG အသင်းကို ပြောင်းရွှေခဲ့ပါတယ်။
နာမည်ကြီး ပေါ်တူဂီကစားသမား စီရော်နယ်လ်ဒိုရဲ့ သူ့ အလုပ်သမားတွေကို သတ်မှတ်ထားတဲ့ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်ကမှ တကယ့်ကို အံ့အားသင့်စရာ။ သူ့ အိမ်မှာ အလုပ်လုပ်မယ့် အိမ်အလုပ်သမားတွေကို ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ သဘောတူညီမှုတစ်ခု သတ်မှတ်ထားတယ်။ အဲဒါကတော့ သူ့ရဲ့ ပြင်ပဘ၀နေထိုင်ပုံတွေ၊ အိမ်တွင်းရေး လျှို့ဝှက်ချက်တွေကို စီရော်နယ်လ်ဒို ဒါမှမဟုတ် သူ့ရဲ့နောက်ဆုံး ဆွေမျိုးတွေ သေဆုံးပြီးတဲ့နောက် နှစ်ပေါင်း(၇၀)အထိ အပြင်မှာ မပေါက်ကြားအောင် ထိန်းသိမ်းထားဖို့ပါပဲ။ ဘာတွေများ လျှို့ဝှက်ချက် ကြီးကြီးမားမား ရှိလဲတော့ မသိပါဘူး။
ပရိသတ်ကြီးရေ .. ဒါကတော့ နာမည်ကျော် ဘောလုံးသမားတွေရဲ့ ရူးကြောင်ကြောင်နိုင်တဲ့ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့တင်မကသေးပါဘူး၊ တခြားနာမည်ကျော် ကစားသမားတွေလည်း ရှိပါသေးတယ်။ အဲဒါကိုတော့ အပိုင်း(၂)အဖြစ် ဆက်လက်ဖော်ပြသွားမှာဖြစ်လို့ စောင့်မျှော်ဖတ်ရှုကြပါဦး . . .
Photo:The Independent,10z Soccer,SoccerBible,
by Naing Linn . 45 mins ago